Primaquine : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Primaquine ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ငှက်ဖျားရောဂါအဖြစ်များတဲ့နိုင်ငံတွေမှာPrimaquineကိုအခြားဆေးတွေနဲ့တွဲပြီးခြင်ကိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ငှက်ဖျားရောဂါကိုကာကွယ်ရန်နဲ့ကုသရန်အတွက်သုံးပါတယ်။ ငှက်ဖျားရောဂါပိုးတွေဟာခြင်ကိုက်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ခန္ဓါကိုယ်ထဲကိုဝင်လာနိုင်ပြီးခန္ဓါကိုယ်ရဲ့တစ်ရှူးတွေဥပမာသွေးနီဥတွေနဲ့အသည်းထဲမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါတယ်။Primaquineကိုအခြားဆေးတွေ(ဥပမာchloroquine)ကသွေးနီဥတွေထဲမှာနေနေတဲ့ငှက်ဖျားရောဂါပိုးတွေကိုသတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသုံးပါတယ်။ အဲနောက်မှာတော့Primaquineကခန္ဓါကိုယ်ရဲ့အခြားတစ်ရှူးတွေထဲမှာရှိနေတဲ့ငှက်ဖျားပိုးတွေကိုဆက်သတ်ပါတယ်။ အဲဒါကငှက်ဖျားရောဂါပိုးထပ်မဝင်အောင်တားပေးပါတယ်။ ရောဂါအရှင်းပျောက်ဖို့အတွက်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးလိုအပ်ပါတယ်။Primaquine phosphateဆေးဟာantimalarialsလို့ခေါ်တဲ့ငှက်ဖျားရောဂါကုသတဲ့ဆေးအုပ်စုထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။
ယခုဆေးကိုအစာအိမ်ပြသနာများမဖြစ်စေရန်အစာနဲ့တွဲပြီးတစ်နေ့တစ်ကြိမ်သောက်ပါသို့မဟုတ်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသောက်ပါ။ သင့်ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာပါ။ သင်ငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေကနေထွက်လာပြီးနောက်Primaquineကိုနှစ်ပတ်လောက်ကြာအောင်သောက်ရပါတယ်။ ဆေးကိုအခြားငှက်ဖျားရောဂါကုဆေးတွေသောက်နေတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်အတွင်းသို့မဟုတ်အခြားဆေးတွေသောက်ပြီးပြီးချင်းမှာစသောက်လို့ရပါတယ်။Primaquineကိုငှက်ဖျားရောဂါကုသဖို့အတွက်၁၄ရက်ထက်ပိုမသောက်သင့်ပါဘူး။
ဆေးသောက်ရမယ့်ပမာဏဟာသင့်မှာရှိနေတဲ့ရောဂါပိုးအမျိုးအသားနဲ့ဆေးအပေါ်သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဆေးကိုပုံမှန်သောက်ပါ။ သင်ကောင်းကောင်းမှတ်မိအောင်ဆေးကိုနေ့တိုင်းအချိန်တစ်ခုပုံသေထားပြီးသောက်ပါ။
ဆေးကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျဆက်သောက်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးကိုညွှန်ကြားထားသည်ထက်ပိုမသောက်ပါနဲ့။ လျှော့လည်းမသောက်ပါနဲ့။ သင်သက်သာလာတယ်ဆိုရင်တောင်မှသင့်ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲဆေးကိုသောက်ရမယ့်အချိန်မပြည့်သေးခင်ရပ်မပစ်ပါနဲ့။ သင့်ဆရာဝန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲဆေးသောက်ဖို့ကျော်ခြင်း၊ဆေးပမာဏပြောင်းလဲခြင်းတို့ပြုလုပ်ပါကရောဂါကာကွယ်ခြင်းနဲ့ကုသခြင်းဟာမထိရောက်တော့ပါဘူး။ ရောဂါပိုးပမာဏကိုလည်းပိုများလာစေပြီးကုသရန်လည်းပိုပြီးခက်ခဲစေပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်းပိုရနိုင်ပါတယ်။
ခြင်ကိုက်မခံရအောင်နေထိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။(ဥပမာ သင့်တော်တဲ့ခြင်မကိုက်စေတဲ့လိမ်းဆေးများလိမ်းခြင်း၊ခန္ဓါကိုယ်အတော်များများကိုဖုံးအုပ်စေတဲ့အဝတ်များဝတ်ခြင်း၊လေကောင်းလေသန့်ရအောင်ထားခြင်း၊ခြင်လုံစကာတပ်ခြင်း၊ခြင်ထောင်ထောင်ခြင်း၊ခြင်ဖျန်းဆေးများသုံးခြင်း)ခရီးမသွားခင်ခြင်မကိုက်စေတဲ့လိမ်းဆေးတွေဝယ်သွားပါ။ အထိရောက်ဆုံးလိမ်းဆေးတွေမှာdiethyltoluamide(DEET)ပါဝင်ပါတယ်။ သင်နဲ့သင့်ကလေးတွေအတွက်သင့်တော်တဲ့ပြင်းအားပမာဏရှိတဲ့လိမ်းဆေးတွေအကြောင်းသိနိုင်ရန်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုမေးမြန်းပါ။
ငှက်ဖျားရောဂါကိုကာကွယ်တဲ့နေရာမှာမည်သည့်ဆေးမှအပြည့်အဝထိရောက်တာမျိုးမရှိပါဘူး။ အဲအတွက်ကြောင့်သင်ငှက်ဖျားရောဂါအဖြစ်များတဲ့နေရာမှာရှိနေပြီးကာကွယ်ဆေးတွေအကုန်သောက်ပြီးတာတောင်သင့်မှာငှက်ဖျားရောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေ(ဥပမာဖျားခြင်း၊ချမ်းတုန်ခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊အခြားတုတ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာများ)ရှိလာပါကချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူပါ။ ပြင်းထန်ပြီးသေစေနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ငှက်ဖျားရောဂါကိုမြန်မြန်ကုသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Primaquineကိုအခန်းအပူချိန်မှာထားတာအကောင်းဆုံးပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ထိတွေ့နိုင်သောနေရာနှင့်စိုစွတ်နေတဲ့နေရာတွေကနေဝေးဝေးထားပါ။ ဆေးအာနိသင်မပျက်အောင်ဆေးကိုရေချိုးခန်းနဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲကိုမထည့်ထားသင့်ပါ။Primaquineဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဆေးထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ချက်များလည်းကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ဆေးထုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဘေးကင်းဖို့အတွက်ဆေးကိုသူတို့နဲ့ဝေးရာမှာထားသင့်ပါတယ်။
Primaquineကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Primaquine အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Primaquineကိုအသုံးမပြုခင်သင့်မှာယခုဆေးနဲ့သို့မဟုတ်အခြားဆေးတွေနဲ့ဓါတ်မတည့်တာမျိုးတွေရှိရင်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုပြောပြပါ။ ယခုဆေးမှာဆေးနဲ့ဓါတ်မတည့်တာတွေသို့မဟုတ်တခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါတတ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အတွက်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုပြောပြပါ။
ယခုဆေးကိုမသုံးခင်သင့်ရဲ့ရောဂါရာဇဝင်အကြောင်းအထူးသဖြင့်ခုခံအားစနစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါများ(ဥပမာlupusရောဂါ၊အဆစ်အမြစ်ရောင်လေးဘက်နာရောဂါ)၊သွေးရောဂါများ(ဥပမာသွေးဖြူဥပမာဏနည်းခြင်း၊သွေးအားနည်းရောဂါ)၊Primaquineကြောင့်ယခင်ကသွေးရောဂါများဖြစ်ဖူးခြင်း(ဥပမာသွေးနီဥတွေပေါက်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့သွေးအားနည်းရောဂါ၊သွေးထဲတွင်methemoglobinများသောရောဂါ)၊G6PDအင်ဇိုင်းချို့တဲ့သောရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်းသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်ထဲမှာဖြစ်ဖူးခြင်း၊သွေးထဲရှိအင်ဇိုင်းများပမာဏနည်းနေခြင်း(G6PD၊NADH methemoglobin reducatse)တို့အကြောင်းကိုသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုပြောပြပါ။
ယခုဆေးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာလုံးဝမသုံးရပါဘူး။ ဆေးကမမွေးလာသေးတဲ့ကလေးငယ်ကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အရွယ်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ယခုဆေးကိုမသောက်ခင်ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိအရင်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။Pimaquineဆေးကိုသောက်နေစဉ်နဲ့သောက်ပြီးမှာကိုယ်ဝန်မရှိအောင်တားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးသောက်နေစဉ်မှာအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးတွေပါစိတ်ချရတဲ့ကိုယ်ဝန်တားခြင်းနည်းလမ်းတွေကိုသုံးဖို့လိုပါတယ်။(ဥပမာကွန်ဒုံးသုံးခြင်း၊သန္ဓေတားဆေးများသုံးခြင်း)။ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ဆေးသောက်ပြီးအနည်းဆုံး၃လလောက်ကြာတဲ့အထိသန္ဓေတားခြင်းနည်းလမ်းတွေကိုဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဆေးသောက်ပြီးအနည်းဆုံးဓမ္မတာရာသီတစ်ခါပြီးတဲ့အထိသန္ဓေတားခြင်းနည်းလမ်းတွေကိုဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်။ သင့်မှာကိုယ်ဝန်ရှိလာပါကသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ရှိလာတော့မယ်လို့ထင်ပါကဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းပြောပြပါ။ သင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ်ငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်နေတဲ့နေရူတစ်ခုကိုသွားပါကသင်နဲ့သင့်ကလေးမှာသေဆုံးနိုင်ချေနဲ့အခြားပြသနာတွေရနိုင်ချေမြင့်တက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကတော့သင့်ရဲ့မမွေးလာသေးတဲ့ကလေးငယ်မှာအန္တရာယ်မရှိနိုင်စေရန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်တစ်လျှောက်မှကလေးမွေးသည်အထိအခြားငှက်ဖျားရောဂါကုဆေးတွေ(ဥပမာchloroquine)ကိုဆက်သောက်ဖို့ညွှန်ကြားပါတယ်။ သင်ကလေးမွေးပြီးတဲ့အခါမှPrimaquineကိုဆက်သောက်နိုင်ပါတယ်။ ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးတွေအကြောင်းကိုဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ယခုဆေးဟာမိခင်နို့ရည်ထဲမှာပါလာပြီးနို့စို့နေတဲ့ကလေးကိုထိခိုက်နိုင်လားဆိုတာကိုမသိရပါဘူး။ ကလေးနို့မတိုက်ခင်ဆရာဝန်အနေနဲ့သင့်ကလေးမှာG6PDအင်ဇိုင်းချို့တဲ့မှုရှိမရှိအရင်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ကလေးနို့မတိုက်ခင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Primaquine ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင်ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးစီမံကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့(FDA)ကPrimaquineကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေအဆင့်Nလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Primaquine ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Primaquine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Primaquineကသင်လက်ရှိသောက်နေတဲ့အခြားဆေးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီးဆေးရဲ့ထိရောက်မှုနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး(စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်)ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Primaquine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Primaquine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Primaquineဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Primaquine ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
-P vivax ရောဂါပိုးရှိတဲ့ဒေသတွေကိုခဏတာခရီးသွားခြင်းအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်အသုံးပြုပါတယ်။
-P vivax သို့မဟုတ် P ovale ကြောင့်ငှက်ဖျားရောဂါပြန်ဖြစ်မှုနှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်သုံးပါတယ်။P vivax၊P ovaleသို့မဟုတ်ရောဂါပိုးနှစ်မျိုးလုံးနဲ့အချိန်ကြာကြာထိတွေ့နေရတဲ့လူနာတွေအတွက်သုံးပါတယ်။
-Chloroquine,doxycycline သို့မဟုတ် mefloquine တို့ကိုရှေ့ဦးရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်သုံးထားတာ်ဆိုရင်ယခုဆေးကိုရောဂါဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းထပ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ခြင်းကုထုံးရဲ့နောက်ဆုံး၂ပတ်အတွင်းမှာသုံးသင့်ပါတယ်။
-ရောဂါကာကွယ်ဖို့အတွက် atovaquone-proguanil ဆေးတွေကိုသုံးထားတယ်ဆိုရင်ယခုဆေးကို atovaquone-proguanilဆေးတွေသောက်ရမယ့်နောက်ဆုံးပတ်နဲ့နောက်ထပ်၇ရက်ကြာအောင်သောက်သင့်ပါတယ်။
Pneumocystis Pneumonia ရောဂါအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသောက်ရန်ဆေးပမာဏ
HIVရောဂါပိုးရှိတဲ့လူနာတွေအတွက်အမေရိကန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၊နိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအသင်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်တဲ့ HIV ရောဂါအသင်းတို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်များ:ဆေး၃၀မီလီဂရမ်(ဆေး၅၂.၆မီလီဂရမ်)ကိုသောက်ဆေးအဖြစ်တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သောက်ပါ။
ရှင်းလင်းအကြံပြုချက်များ:clindamycinဆေးနဲ့တွဲပြီးအပျော့စားသို့မဟုတ်အလယ်အလတ် Pneumocystis pneumonia(PCP)ရောဂါနဲ့အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့PCPရောဂါတို့ကိုပုံစံတစ်မျိုးဖြင့်ကုသခြင်းကုထုံးအတွက်သုံးပါတယ်။
-ယခုဆေးရဲ့ဆေးပမာဏကိုဆေးရဲ့အခြေခံပုံစံအနေနဲ့ပဲဖော်ပြပြီးတွက်ချက်ပါတယ်။ ဆေးပြားတစ်ပြားမှာပါတဲ့primaquine phosphate ၂၆.၃မီလီဂရမ်ဟာ primaquine အခြေ ခံပုံစံ၁၅မီလီဂရမ်နဲ့တူပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Primaquine ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Pneumocystis Pneumonia ရောဂါအတွက်ကလေးသောက်ရန်ဆေးပမာဏ
Primaquineဆေးကိုသောက်ဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက(မေ့ခဲ့ပါက)သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်ပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Primaquine Dosage. https://www.drugs.com/dosage/primaquine.html. Accessed April 9, 2018.
Primaquine. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-12232/primaquine-oral/details. Accessed April 9, 2018.